Muzvinafundo Mukonza Votaura Nhoroondo Yavo Kusvika Nhasi
Muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa.
Kune vakawanda, VaRicky Munyaradzi Mukonza vanongovewo mumwe wevanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vachibuda mudzinhepfenyuro nemapepanhau.
Asi muhupenyu hwezuva nezuva, VaMukonza ndimuzvinafundo vakaita zvidzidzo zvePhD zvePublic Management and Adminstration vachidzidzisa pachikoro chepamusorosoro cheTswane University of Technology chiri muPolokwane muSouth Africa.
Muzvinafundo Mukonza vanotungamirawo boka rezvidzidzo zvehunhu nemafungiro evanhu, kana kuti Faculty of Humanity pakare paPolokwane.
Muzvinafundo Mukonza vakaberekerwa paChivhu General Hospital kumusha kwavo kuri kuMarondamashanu, kwakare kuChivu vachiberekwa mumhuri yevana vana vakomana vavatu nemusikana mumwechete, ivo vari ivo dangwe, vabereki vavo vari VaPhineas naMai Maud Emilia Mukonza, avo vakashaya.
Vanoti vakangokurawo vachirarama semhuri sevamwe vazhinji sezvo mhuri yavo yakanga isina kubudirira zvakanyanya, asi vakakwanisa kudzidza zvekusvika pachikoro chepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe apo vakaita dhigirii ravo rekutanga.
Muzvinafundo Mukonza vakazobuda munyika muna 2006 vakananga kuSouth Africa vachitsvaga mafuro manyoro. Asi ikoko zvinhu hazvina kusvikoita nyore kuna Muzvinafundo Mukonza sezvo vachiti vakasvikoshaya basa kunyange hazvo vaive nefundo yavo muhomwe.
Sezvo vaiziva chinangwa chavo, havana kusarura mabasa vakasnada chero basa ravaiwana kusanganisira kubatsira vanovaka dzimba, kukanya zvidhinha nemamwe, panguva imwechete vachwedzera dzidzo yavo.
Vakazowana mukana wekuti vadzidzise paTswane University asi vasina kubairwa chitupa kusvika muna 2011 apo chikoro ichi chakazoona mabatiro avaiita basa ravo, izvo zvakazoita kuti vawedzerwe makore ekuti vange vachishandapo.
Muna 2021 Muzvinafundo Mukonza vakazopiwa ruremekedzo rwekuve muzvinafundo.
Muzvinafundo Mukonza vane mudzimai wavo, Doctor Chipo Mukonza, avo vanodzidzisawo zvakare paTswane University of Technology vari kudivi rezvemabhizimusi, uye vakakomborerwa nevana vatatu, vasikana vaviri nemukomana mumwechete.
Hurukuro naMuzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza